Iirobhothi zilapha ukuhlala - Geofumed
Agasti, 2009 ezintsha
Kwiinyanga ezimbalwa ezedlule i-National Geographics yanikezela isembozo sayo kwisihloko kunye namaphepha ambalwa ukuthetha malunga nokuba i-robhotics iqhubekele phambili njani. Kakade ke, loo nto ayinanto yakwenza noko kuthotho umabonwakude lwe iphawu lemifanekiso uboniso ye 80 kaThixo, ukuqikelela ukuba ngeli xesha siya kuba iirobhothi kunye iifomu zabantu, Ngokusebenza kunye nathi, ukucinga nkqu ehlasela ihlabathi ukulawula.
Kodwa imbono yokuqala yerobhothi iye yahamba imihla ngemihla, kwishishini esiyibonayo ixesha elide edlulileyo, ukwenza iitshini zenkqubo. Iinkampani ezinjengeRobot zenze ukuba ezi zifikelele kwiinjongo ezingaphezulu kwansuku zonke. Ngenye imini ndahlala eHouston, kunye nomhlobo onenja enhle, kodwa ushiya iinwele yonke indawo, saqala ukuya kwi-geofumar malunga nokuba kutheni amathoyizi ebaluleke kangaka kweli hlabathi, kwaye ngamanani amaninzi aphantsi. oko kwakuya kuba yindleko yokwenza loo mizila yabantu abaphilayo. Phakathi kwezinto ezisetyenziselwa ukuthengisa iimpahla, i-militia, ukucoca ekhaya, ukucocwa kwezonyango, ukhuseleko lwangasese, uxhulumaniso olude kunye nophando.
Imfuneko ukusindisa ubomi yenze izinto zokudlala zokuva emigodini, wenze ukhenketho semiautonomous, 2 kunye 3 ngaske ezinemilinganiselo, ukujikelezisa ziyaphuhliswa iimaphu, oku kuphela mhlaba kodwa umoya kunye nokusingqongileyo elwandle. NgoMeyi wale nyaka, inkampani ye-Irobots ibike ukuba inesicelo esivela kwi-US Navy kwi-16.8 yezigidigidi zeedola. Ukubonisa ubuncinane iikopi ezintathu kwizenzo.
Unokusebenzisa i-rock ukuya kuma-150 wamakhilogremu, ubukele ukuba isebenze nento eqhubhisayo. Bangakwazi ukunyuka amanqanaba. Kukulungele ukuzithumela ukuba zihlolisise iinjongo zemikhosi kuphela kodwa zokhuseleko loluntu Iyakwazi ukubona iimigodi elwandle, kwaye iyakwazi ukuvelisa ulwazi kwi-model yamanzi yedijithali.
Ikhaya lisebenzisa iirobhothi
Kodwa akukho namnye kuthi unamalungiselelo amaninzi okuthenga into enjalo, kuba asiyena mkhosi. Kodwa imisebenzi eqhelekileyo, ukhathele, ngokuqhelekileyo kwaye ukuthatha umonde wethu ngowokuqala apho umhlaba we-robotics uqhube khona. Kutshayelwe, vacuuming ekhaphethini, utyani Ukuchetywa kunye nokucoca imiphantsi okanye echibini zizinto yesiqhelo ukuba kwiminyaka emibini yokuqala ukutshata ndide kwakumnandi kubo. Kodwa ukuvama okufunekayo, ithoni yomntu oyicelayo okanye intlawulo emele ihlawulwe umntu ukuba yenze into iyaba nzima.
Yaye yilapho ukuthengiswa kwezi mveliso kufike khona, kuba ixesha lemihla lixabiseke gqitha ukuba lichithe ukucoceka ikati ehambayo yonke imihla. Makhe sibone imizekelo:
Uyamkela iphephethi, njengokungathi ungumqeshwa wengcali. Ngokwemeko ukuba abavoli bayo banokuchaneka kokwazi xa kudingeka enye idlule ngaphandle kokushiya intshi ngaphandle. Ndiyayithanda le nto, hlambulula iziteshi, yibeke nje ekugqibeleni uze uhambe njengomyeni onobuqhawe ekupheliseni umphumo weenyanga zemozulu. Unokuhlambulula phantsi kwamachibi, ufanele ubeke ngaphakathi kwaye oku kukunyusa ukususa uthuli, iinwele kunye ne-algae kunye neebhaktheriya.
Utshintsho lwaba njengokuba iSooba kunye no-DirtDog bachitha umsebenzi, bahlambulule phantsi kweemeko ezimbi nakwinkcazo. Ngaphandle kwezixhobo ezongezelelweyo ezibugcisa.
Umsebenzi ococa echibini kabini ngenyanga, kukucheba enye, coca ekhaphethini kabini ngeveki ayitshayele egaraji elimdaka, kwaneenwele kunye iintsalela of the pet yonke imihla kwakufuneka ukutshaja xa kuphuhliswa esiphakathi lizwe abangenzi ngaphantsi kwe $ 6 ixesha, sigqibe iiyure ngosuku 7 zokusebenza, iintsuku ngeveki kuya kuthetha 6 nganye ngenyanga $ 1,000 iinzuzo zengqesho ezihambelana ngakumbi, ngoxa kwilizwe asakhasayo akwazi ukuya for $ 300. Ezi zokudlala hamba zidla isiqingatha, yaye esi sizathu lenza abantu abafuni ukuchitha ixesha labo ukuqokelela inja Lutho ukhethe ukutyala imali irobhothi ukusukela $ 300.
Xa umntu efuna ukwenza utshintsho, uphuhliso lweevenki luvulekile kwaye luvumela ukudala ii-routines ezizodwa.
Iinkampani ezinikezelwe ukubonelela ngeenkonzo zokucoca ziyakwenza ngokwezifiso ukusebenza ngokusebenzisa iAware 2.0 kunye neenkampani eziphuhlisa izesebenzi zingenza ezinye izinto ezininzi.
Kwaye mna ... ndifuna enye!
Yiya kwi-iRobot >>
Post edlulileyo«Edlulileyo Apho ukuthenga i-GPS
Post Next I-TopoCAD, ngaphezu kwe-Topo, ngaphezu kwe-CADOkulandelayo "